Ngomhla we-Meyi ngoMeyi 2019 i-Horoscope yenyanga - Amanqaku Ehoroscope
Eyona Amanqaku Ehoroscope Ngomhla we-Meyi ngoMeyi 2019 i-Horoscope yenyanga
Ngomhla we-Meyi ngoMeyi 2019 i-Horoscope yenyanga
Uqinisekile ukonwabela ubomi obumnandi ngalo Meyi njengoko kubonakala ngathi impembelelo yeVenus kumqondiso wakho ngoku yomelele kakhulu, ke unexesha lokuzonwabisa nokudlala ngothando.
Oku akusebenzi kubudlelwane obutsha kuphela kodwa nakubudlelwane bexesha elide. Uya kuziva ngathi ubuye wathandana kwakhona. Kwaye ayilulo uthando kuphela olunokukunika amabhabhathane kodwa kunye nezinye iintlobo zonxibelelwano lwasentlalweni. Ungayichazanga eyokuba uyacetyiswa ngokupheleleyo ukuba ungayikhathaleli usapho lwakho kule nyanga.
Indoda ye-aquarius ibetha umtshato wabasetyhini
Kuza kubakho iintsuku ezimbalwa ezixineneyo kodwa uya kuba nakho ukuhambisa ezidlulileyo ngokulula nangobabalo. Ungumtsalane kwaye uza kuthetha kamnandi uphume kuyo nantoni na.
Amatheko kunye neziganeko zentlalo ziya kuba nomdla, ngakumbi ngexesha lesibini lenyanga. Usenokufumana nethuba lokudibana nomntu onomdla, mhlawumbi umntu onokukunceda emsebenzini.
Ngokwezezimali, uya kuba nethamsanqa kwinxalenye yesibini yenyanga. Ukuba kwinxalenye yokuqala unobunzima kwaye uya kusokola ukulungelelanisa inkcitho yakho, loo nto ayinakuthethwa malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo, xa ithamsanqa liza kuba kwelakho icala.
Ngomhla wokuqala wenyanga, imeko yexesha Imercury kwiiAries kunye ISaturn e-Capricorn inokuphazamiseka ebomini bakho ngeziphumo ezithile ezomeleleyo. Abanye bemveli baya kunyanzelwa ukuba benze into elungileyo kwaye bade bamkele nakwezinye izigqibo ezingalunganga kwixesha labo elidlulileyo.
Awunakho ukuphosa nantoni na phantsi kwekhaphethi kuba le nto ithatha inyaniso ekukhanyeni, ithuba elihle lokwakha into ehlala ihleli kwikamva eliqinileyo nelicocekileyo.
I-atmosfere iyahambelana, ngakumbi abo bantu baya kudibana nabantwana bayo yonke iminyaka, kwiveki yokuqala kaMeyi.
Eminye imisebenzi yasekhaya inokukugcina ubambekile ekhaya ngeempelaveki zokuqala kodwa awuzukukhalaza, kodwa, ngokungaqhelekanga, uya kufumana ulonwabo kunye nokufezekisa okwenzayo.
Malunga phakathi enyangeni, unokujamelana nokuphikisana kunye nokungqubana kwamandla nomntu onegunya. Ukuba uziva ngentliziyo yakho yonke ukuba ulungile, kuya kufuneka ulandele oku kude kube sekupheleni.
Kunokubakho nesizathu esingokweemvakalelo sokuba wenze oku kwaye ukuba kunjalo, uya kufuna ukuyibeka ngakumbi le nto.
Emva kwama-23rd, uya kuba nentlalontle ngakumbi kodwa oku akuthethi ukuba uya konwaba kakhulu kukunxibelelana kwakho kwezentlalo.
Isinese zodiac uphawu ngo-1988
Ngokuchasene noko, kusenokwenzeka ukuba umona kunye nokukrokrela kuya kungena kwindawo yakho. Uya kukhetha ukungaceli mngeni kuye nabani na kwaye uya kuhlala nje ngokucinga kwakho.
U-Leo uthanda i-horoscope ngoMeyi
Kwisiqingatha sokuqala sikaMeyi, kuya kuthiwa uqhutywa yiminqweno evuthayo yazo zonke iintlobo, ezinye ongakhange uzive ngaphambili.
Ufuna ukubona ukuba ubudlelwane bemvakalelo buya kanye kwicala olifunayo okanye, ngubani owaziyo, uphulukana neengcinga ezinzulu, usenza ubambiswano lobuhlobo olusele lukhulile ngokwaneleyo.
Abanye abemi baya kutshintsha ngesiquphe izicwangciso zabo zekamva, kuba banokuzama ukubuyisa idangatye ebomini babo.
Okanye banokuziva isidingo sokunxibelelana nomntu okwangaphambili ukuze aqiniseke ukuba yonke into idlulile ngaphambi kokuba baqale indlela entsha.
Malunga phakathi enyangeni, umona kunye nokufumana izinto kunokuvela kodwa oku kuya kuba kukufutshane. Abo banamaqabane aziphethe kakuhle kwaye abanesidima banokuziva bengalunganga nokuba nezo ngcinga malunga namaqabane abo.
Kulenyanga ujolise ngakumbi kwikhondo lomsebenzi kwaye ukulungele ukushiya uxanduva lwendlu kunye nobudlelwane emagxeni eqabane lakho, kodwa ke oku akuncedi.
Kwaye ukuba awutshatanga, ufuna ubudlelwane, mhlawumbi ngexesha lesibini lenyanga, kukho ithuba lokufumana umntu.
Umtsalane ngesiquphe, nomtsalane unokubeka umbono wakho kwinxalenye yokugqibela yenyanga. Eyona nto inokwenzeka, i-idyll isethwe kwimeko yobungcali, kunye nomntu osele unolwalamano olusebenzayo naye.
Ilanga, ibhunga lakho elilawulayo , ikhanya kwindlu yakho yeshumi, isenza wonke umntu abe namabhongo ngakumbi. Imicimbi yothando ngoku sisihlomelo kubomi bobuchwephesha, ulonwabo nje oluyokwenza oomatshini ukuba baqhubeke apho lubaluleke khona ngokwenene.
Inkqubela phambili yomsebenzi kule nyanga
Akukho mvakalelo ingcono kunokwenza into oyithandayo ngaphezu kwayo nayiphi na into esehlabathini, akunjalo? Ewe, eli lithuba lakho lokwenza imeko esebenzayo yokubamba kwakho, Leo. Uyakwazi ukukhokela kwaye uqondise iimeko ezikuthandayo kulo Meyi.
Unokufumanisa ukuba iindlela ezindala azisebenzi kwakhona kwaye unyanzelekile ukuba uyile kwaye ube nobuchule.
Kuya kufuneka uzilungiselele kakuhle, uqaphele imida yakho, kwaye uthathe kuphela ukuba ungahamba ixesha elingakanani. Inkxaso engaguquguqukiyo iya kufunyanwa phakathi enyangeni isuka kumntu onobuchule.
Olunye utyekelo lukwathetha ngotshintsho olubalulekileyo lomsebenzi, kodwa yinkqubo eya kuqala kamva enyangeni kwaye iya kuqhubeka ngoJuni.
Kusekho ukungaqiniseki okuninzi kwinxalenye yezemali yobomi bakho, kodwa zibangelwa ngabahlobo, amaqabane, okanye amalungu osapho.
Izinto azicacanga, mhlawumbi ngenxa yokuba amalungelo kunye nezibophelelo zixubekile, zisasazwa ngokungalinganiyo, kodwa akukho namnye ujongana nale micimbi.
Malunga ne-25thungaqokelela isibindi kunye nokucaca ukuqala ukuthetha ngaphandle kodwa le ikwayinkqubo ende. Nangona kunjalo, kulungile ukuba ibhola iqengqeleka ngoku.
Jonga uLeo Horoscope 2019 Uqikelelo oluphambili
Ngomhla wama-23 ku-Epreli iZodiac yiTaurus-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
I-Rooster Man Tiger Umfazi ukuhambelana kwexesha elide
Indoda ye-gemini iyabonakalisa ukuhambelana komfazi
indlela yokuphumelela umfazi we-taurus
indlela yokwenza umntu we-sagittarius abe nomona
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoDisemba 31
gemini eyindoda gemini ukungqinelana kwabasetyhini
yintoni uphawu lukajuni 12 zodiac